နိုင်ငံတကာသတင်း Archives - CeleLove
March 15, 2020 CeleLove 0
ကိုယ်ပိုင်ဟိုတယ်တစ်ခုကို ဆေးရုံအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီး ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်လူနာတွေကို အခမဲ့ကုသပေးသွားမယ့် ရော်နယ်လ်ဒို ဘောလုံးလောကရဲ့ အအောင်မြင်ဆုံး နာမည်ကြီး ကစားသမား စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ပေါ်တူဂီမှ သူပိုင်သည့်ဟော်တယ်များကို ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ဆေးရုံများအဖြစ် မကြာခင်အချိန်အတွင်းပြောင်းလဲပေးပြီး အခမဲဆေးကုသမှုပါ ဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ် … ။ ဒါ့အပြင် အဆိုပါ ဆေးရုံမှာ လာရောက် ကုသပေးတဲ့ ဆရာဝန်များ၊ […]
5 နှစ်အရွယ်သမီးလေးကို ပွေ့ပြီး မောင်းနှင်လာသော ရထားရှေ့တည့်တည့် ခုန်ချပြီးသတ်သေခဲ့တဲ့ ဖခင် (ရုပ်သံ)
March 5, 2020 CeleLove 0
5 နှစ်အရွယ်သမီးလေးကို ပွေ့ပြီး မောင်းနှင်လာသော ရထားရှေ့တည့်တည့် ခုန်ချပြီးသတ်သေခဲ့တဲ့ ဖခင် (ရုပ်သံ) New York မြို့က မြေအောက်မီးရထားလမ်းတစ်ခုမှာ အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာ သူ၏ 5နှစ်အရွယ် သမီးလေးကိုပွေ့ချီပြီး မောင်းနှင်လာသော ရထားရှေ့တည့်တည့်သို့ ခုန်ချကာ ကိုယ့်ကိုအဆုံးစီရင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ် …. ။ သို့ပေမဲ့လည်း မယုံနိုင်လောက်အောင်ပဲ ကလေးငယ်ဟာအသက်ရှင်ကျန်ရစ်နေခဲ့ပြီး […]
ကလေးကားတိုက်သွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်မှာ ကလေးမိခင်ကော ၊ ကားဆရာ၏အမှားတွေကိုပါ ပေါ်လွင်စေခဲ့တဲ့ (ရုပ်/သံ)
March 2, 2020 CeleLove 0
ကလေးကားတိုက်သွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်မှာ ကလေးမိခင်ကော ၊ ကားဆရာ၏အမှားတွေကိုပါ ပေါ်လွင်စေခဲ့တဲ့ (ရုပ်/သံ) ကလေးငယ်လေးတစ်ယောက်ဟာ မောင်းနှင်လာခဲ့တဲ့ကားရှေ့တည့်တည့်ဝင်ပြေးခဲ့မိလို့ အသက်သေဆုံးတော့မဲ့ အခြေအနေမျိုးနှင့်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ် ။ အဆိုပါအဖြစ်အပျက်ဟာ စင်ကာပူနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး အဆိုပါvideo ကိုတော့ လမ်းတစ်ဖက်ကနေမောင်းနှင်းလာခဲ့တဲ့ Taxi ကားလို့ယူဆရတဲ့ ကားဆီမှမှတ်တင်တင်းထားနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ် … ။ Video ရဲ့အစပိုင်းမှာတော့ အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်နှင့် ကလေးနှစ်ယောက်တို့ဟာ […]
လမ်းဘေးခွေးတွေကို အပ်ချောင်းတွေ ၊ သံချောင်းတွေ ထိုးစိုက်ထားတဲ့ ပေါင်မုန့်တွေကိုကျွေးခဲ့ကြသူတွေ
February 28, 2020 CeleLove 0
လမ်းဘေးခွေးတွေကို အပ်ချောင်းတွေ ၊ သံချောင်းတွေ ထိုးစိုက်ထားတဲ့ ပေါင်မုန့်တွေကိုကျွေးခဲ့ကြသူတွေ လူတွေနဲ့ အတူနှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာ အတူနေလာခဲ့ကြတဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေထဲမှာ ဆိုရင် ခွေးလေးတွေက အဓိကပဲလို့ ပြောရလောက်အောင်ပါပဲ …။ ခွေးလေးတွေဟာ လူတွေအပေါ်အသိတတ်ဆုံး ၊အကူညီဆုံး တိရစ္ဆာန်ဖြစ်ကြပေမဲ့လည်း လူတွေက စွန့်ကျဲမှ စားသောက်ရတဲ့ အကောင်လေးတွေပါ …။ ထို့အတူပါပဲ […]
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ လူစိတ်ဝင်စားမှုများနေတဲ့ သနားစရာ အဖွားအိုလေး
February 27, 2020 CeleLove 0
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ လူစိတ်ဝင်စားမှုများနေတဲ့ သနားစရာ အဖွားအိုလေး မိခင် ၊ အဘွား ဆိုတဲ့ သူတွေဟာ ကိုယ်တွေမသိတတ်သေးတဲ့ အချိန်ကတည်းကစပြီး ကိုယ့်ကိုအမြဲပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့အပေါ် လေးစား ဂရုဏာစိတ်ထားတတ်ရမှာ သဘာဝပါပဲလေ ။ သို့ပေမဲ့လည်း အချို့သောသူတွေက ကျေးဇူးသိတတ်တဲ့စိတ်မရှိတဲ့အပြင် ရက်စက် ယုတ်မာတတ်ကြပါတယ် …။ ဒီတစ်ခေါက် social […]
ရေကူးကန်ထဲကို တံတွေးထွေးထည့်ပြီး အခြားသူတွေ ရောဂါကူးစက်အောင် ကြံစည်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသူလေး
ရေကူးကန်ထဲကို တံတွေးထွေးထည့်ပြီး အခြားသူတွေ ရောဂါကူးစက်အောင် ကြံစည်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသူလေး ရောဂါကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုမရှိအောင် လူအများက ဝိုင်းဝန်ကာကွယ်ပြီး ၊ ကုသမှုများ ပြုလုပ်ကြပေမဲ့လည်း အချို့သော စိတ်ထားယုတ်မာလွန်းသူတွေကတော့ မိမိခံစားရသော ရောဂါဝေဒနာတွေကို အခြားသူတွေပါ ကူးစက်ခံစားရအောင် ယုတ်မာတတ်ကြပါတယ် … ။ ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း မလေးရှားနိုင်ငံ ၊ Kuala […]
February 26, 2020 CeleLove 0
ကိုရီးယားမှာ ကိုရိုနာကူးစက်သူ အယောက် ၂၀ ကျော် ၃၀ လောက်ကနေ ရက်ပိုင်းအတွင်း ဘာကြောင့် ၈၃၃ ယောက် ဖြစ်သွားရသလဲ? ကိုရီးယားမှာ COVID-19 ကူးစက်သူ အယောက် ၂၀ ကျော် ၃၀ လောက်ကနေ ရက်ပိုင်းအတွင်း ဘာကြောင့် ၈၃၃ ယောက် ( […]
ဆရာမကို ဒူးထောက်သွားဖို့ ဒဏ်ပေးခဲ့တဲ့ လူချမ်းသာ ကျောင်းသားမိဘရဲ့လုပ်ရပ်(ရုပ်သံ)
ဆရာမကို ဒူးထောက်သွားဖို့ ဒဏ်ပေးခဲ့တဲ့ လူချမ်းသာ ကျောင်းသားမိဘရဲ့လုပ်ရပ်(ရုပ်သံ) မလေးရှားနိုင်ငံက လူချမ်းသာ ကျောင်းသားမိခင်တစ်ဦးဟာ သူမရဲ့ကလေးကို ဒဏ်ပေးခဲ့တဲ့ ကျောင်းဆရာမကို အတန်းထဲမှာ လေးဘက်ထောက် သွားဖို့အတွက် စေခိုင်းခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ် …. ။ အဆိုပါ ကလေးမိခင်ဟာ ဆရာမ ဒူးထောက်ပြီး သွားလာနေတာကို စိမ်ပြေနပြေ ကြည့်ခဲ့တယ်လို့လည်း […]
ဇနီးကိုသတ်ပြီး မျက်မြင်သက်သေဖြစ်နေခဲ့တဲ့သားဖြစ်သူကိုပါ ခုတ်ထစ်ပြီးအလောင်းဖျောက်ပစ်ခဲ့တဲ့ ဖခင် (ရုပ်/သံ)
February 25, 2020 CeleLove 0
ဇနီးကိုသတ်ပြီး မျက်မြင်သက်သေဖြစ်နေခဲ့တဲ့သားဖြစ်သူကိုပါ ခုတ်ထစ်ပြီးအလောင်းဖျောက်ပစ်ခဲ့တဲ့ ဖခင် (ရုပ်/သံ) စင်ကာပူနိုင်ငံသားတစ်ဦးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နေ့က မလေးရှားနိုင်ငံ ၊ Malacca မြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူမဆန်လွန်းတဲ့ လူသတ်မှုတစ်ခုကြောင့် ရဲအရာရှိတွေရဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းခံခဲ့ရပါတယ် …. ။ အစိတ်စိတ်ခုတ်ထစ်ခံခဲ့ရတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်း 8ခုကို မြက်ပင်များဖြင့်ပြည့်နှက်နေသောတောဖက်လမ်းဘေးတစ်နေရာမှာ မယုံနိုင်လောက်အောင်ပြင်းထန်လွန်းလှတဲ့အနံ့အသက်ရရှိခဲ့၍ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် …. ။ အစပိုင်းမှာတော့ လူတစ်ယောက်တည်း၏ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းလို့သာ […]
ကွဲကွာနေတဲ့မိဘတွေတွေ့ရဖို့ လမ်းစားရိတ်အတွက်SUPER 100မှာ ဝင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ ထိုင်းရောက်မြန်မာမိန်းကလေးငယ်(ရုပ်သံ)
February 24, 2020 CeleLove 0
ကွဲကွာနေတဲ့မိဘတွေတွေ့ရဖို့ လမ်းစားရိတ်အတွက်SUPER 100မှာ ဝင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ ထိုင်းရောက်မြန်မာမိန်းကလေးငယ်(ရုပ်သံ) ကွဲကွာနေတဲ့မိဘတွေတွေ့ရဖို့ လမ်းစားရိတ်အတွက်SUPER 100မှာ ဝင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ ထိုင်းရောက်မြန်မာမိန်းကလေးငယ်(ရုပ်သံ) လေးပါ … ။ လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ ချစ်ရတဲ့မိဘတွေနဲ့ အတူတူပဲမရှိအတူ ရှိအတူနေထိုင်ချင်ကြပါတယ်။ဒါပေမယ့် စီးပွားရေးအဆင်မပြေမှုတွေကြောင့် ဆင်းရဲလှတဲ့ မြန်မာနှစ်ဘနှစ်ဦးနဲ့ ငယ်စဉ်ကတည်းက ခွဲခွာပြီး ဦးလေးရှိရာ ထိုင်းနိုင်ငံကို နေထိုင်ခဲ့ရ […]